Multicolored chickpea salad - Ntụziaka | Ntụziaka
Multicolored chickpea salad
Alicia tomero | 15/03/2021 11:00 | Menmụaka menus
Chickpeas bụ ụzọ kachasị mma iji tinye ọtụtụ nri na nri anyị. Tozọ isi rie mkpo bụ àgwà dị ezigbo mma ma maka ụmụaka na ndị okenye na anyị maara na anyị ga-agụnye ha ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'izu na anyị menus. Iji mee ka chickpeas na-atọkwu ụtọ, anyị nwere ike ịkwadebe ha n'ụzọ dị mfe ebe anyị tinyere akwụkwọ nri mara mma na obere tuna, nke mere na ịchọrọ iri ya ma nwee ike ịgbakwunye ọtụtụ nri ndị na-edozi ahụ.
Oge niile: 10 m
400 g nke raw ma ọ bụ sie chickpeas n'ime ite
Ọkara otu ọbara ọbara uhie
Obere mkpọ nke ọka esiri esi
Obere mkpọ tuna n'ime mmanụ
Abụọ na-atụtụ gherkins
7 cherị tomato
Anyị na-etinye sook banyere 12 awa nke mbụ chickpeas n'ime efere, kpuchie ya na mmiri oyi. Mgbe oge na-aga anyị na-asọpụ ha ma tinye ha ka ha esi nri n'ime ite, na mmiri na nnu ma ruo mgbe ha ga-adị nro.
Ọ bụrụ n ’ọ masịrị anyị iji chickpeas esiri esi, anyị ga-ewepu chickpeas n’ime ite, gbanye ha ma anyị na-asa mmiri nke ọma.
N'ime efere anyị na-agbakwunye chickpeas ma anyị nwere ike ịgbakwunye ihe ndị ahụ iji mee salad. Anyị na-amalite igbutu yabasị na obere iberibe anyị tinye ya.
Anyị ga-agbakwunye tuna na ọka. Anyị jidere Pịkụl anyị na-egbutu ha nke ọma.
Anyị ga-eme otu ihe ahụ Udara tomato, anyị na-egbutu ha n'ime obere iberibe ma tinye ya na salad.
Anyị ga-agbakwunye nnu ole na ole oge na mmanụ na mmanya na-amasị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Menmụaka menus » Multicolored chickpea salad
Butternut squash na broccoli ofe